Chelsea Oo Stamford Bridge Ku Xasuuqday Arsenal Xilli Ay 12 Dhibcood Oo Nadiif Ah Ay Ku Qabteen Hogaanka Horyaalka. | Somaliland Tomorrow
February 4, 2017 - Written by eng Maxamed Cabdi
Chelsea ayaa si dhab ah u qabatay wadadii ay ku hanan laheyd horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ka dib markii ay 3-1 ku xasuuqeen kooxda kaalinta 3aad ee Arsenal oo marti ku aheyd Stamford Bridge, waxaana ay haatan hogaanka Premier League ku qabteen 12 dhibcood oo nadiif ah iyadoo Eden Hazard uu dhaliyay gool cajiib ah.
Tababare Antonio Conte ayaa hal bedel ku sameeyay shaxdiisa iyadoo Pedro uu booska kala baxay Willian, halka tababare Arsene Wenger uu isna isbedelo ku sameeyay shaxdiisa Oxlade-Chambelain iyo Theo Walcott ayaa kala bedelay Ramsey iyo Oliver Giroud.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si xamaasad leh iyadoo Arsenal ay daqiiqadihii ugu horeysay isku dayaysay inay cadaadis saarto kooxda martida loo ahaa, taasoo keentay in bilowgii ciyaarta uu baas qalday goolhaye Thibaut Courtos taasoo keentay in Alex Iwobi uu kubada ku helo meel u dhow goolka, laakiin darbadiisii goolka ku bartilmaameedsaneyd ayaa laga saaray.
Chelsea ayaa iyadana dhankeeda fursad heshay markii kubad laad xor ah oo la soo qaaday uu madax furan ku helay Gary Cahill laakiin si xun ayuu dhulka ugu garaacay kubada taasoo keentay inay ka dulboodo goolka.
Chelsea ayaana hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 13aad markii Victor Moses uu garab midig ku fasaxay Pedro kaasoo karoos fiican soo dhigay, waxaa kubada madaxa la helay Diego Costa laakiin waxay ku dhacday birta kore, iyadoo kubadii soo laabatay uu madaxa ku dhaliyay Marcos Alonso, waana goolkiisii 4aad ee uu xilli ciyaareedkan ka dhaliyo Premier League.
In gool laga dhaliyay Arsenal waxaa u sii dheereyd inuu dhaawac kaga baxay Hector Bellerin kaasoo si xun u dhacay markii uu kubada madaxa ka difaacanayay Alonso, iyadoo ku celiskii la daawaday ay sidoo kale muujineysay in xusulka Alonso uu ku dhacay Bellerin, waxaana garoonka looga saaray shaki laga qabay in shoog maskaxeed uu soo gaaray, waxaana bedelay Gabriel.
Daqiiqadii 18aad ayaa mar kale la kala furay Arsenal. Costa ayaa ka soo xarooday garabka midig laakiin darbadii uu xerada ganaaxa ka dhex tuuray waxa ay ku dhacday dhinaca shabaqa.
Fursadii ugu fiicneyd ee Arsenal waxa ay timid daqiiqadii 37aad markii Monreal uu kubad gees laad ah uu ku guuleystay. Ozil ayaa kubada koonerka aheyd baasay, iyadoo Oxlade-Chamberlain uu kubad macaan u qaaday Gabriel kaasoo boos fiican u taagnaa inuu shabaqa soo taabto, waxa uu galay kubad madax aheyd oo xoogan laakiin Courtois oo duulaya ayaa hal gacan oo feer ah kubada kaga bixiyay.
Daqiiqadii labaad ee afar daqiiqo oo lagu daray qeybtii 1aad ee ciyaarta ayay Arsenal heshay fursad kale oo ay ciyaarta ku barbareyn kartay. Coquelin ayaa soo bilaabay oo kubad u dhigay Walcott oo xerada goolka ku dhex jira laakiin waxa uu xiddiga Ingariiska kubada u taagay Coquelin kaasoo isna baas cajiib ah u dhigay Ozil oo meel banaan oo xerada goolka ah dhex taagan. Xiddiga Jarmalka ayaase waqti dheer u qaatay inuu kubada darbeeyo iyadoo markii ugu danbeysay ee uu kubada darbeeyay uu gacanta ku dhigay goolhaye Courtois.
Waxaa qeybtii 1aad lagu kala nastay 1-0 oo ay Chelsea hogaanka ku heysay.
Daqiiqadii 53aad ee ciyaarta Chelsea ayaa heshay goolkeedii labaad ee ciyaarta kaasoo ahaa gool cajiib ah oo indhaha u roon. Eden Hazard ayaa kubad ay iska qaldeen Arsenal waxa uu ka soo jiiday bartamaha garoonka, waxa uu orod kaga tagay Coquelin ka hor inta h–e iyo gadaal u jeedinin Koscielny islamarkaana kubada dabamarinin daafaca Mustafi iyo goolhaye Petr Cech, waa gool ay tahay inaad daawato si aad uga maqsuudo.
Daqiiqadii 78aad iyo 79aad Arsenal ayaa heshay labo fursadood oo isku xigta,kubad laga soo dhigay dhanka midig ayaa waxaa si qatar ah madaxa ugu taabtay Welbeck, laakiin waxaa u soo degdegay goolhaye Courtois oo badbaadiyay. Daqiiqadii ku xigtay Mustafi ayaa madax la helay kubad uu soo dhigay Ozil laakiin meel lix mitir u jirta goolka ayuu ka toogan waayay shabaqa.
Daqiiqadii 85aad waxaa Arsenal quusiyay oo ciyaarta hurdo u diray kabtankoodii horre Cesc Fabregas kaasoo bedel ku soo galay wax yar ka hor inta uusan shabaqa soo taabanin.
Peter Cech ayaa kubad uu bixinayay waxa uu si toos ah lugta ugu geliyay Cesc Fabregas kaasoo aamini waayay nasiibkiisa. Hal mar ayuu taabtay ka hor inta uusan shabaqa ka soo tooganin meel 25 mitir u jirta. Fabregas ayaan wax dabaaldeg ah sameynin madaama uu gool ka dhaliyay kooxdiisii horre, laakiin Petr Cech ayay u aheyd maalin xun iyo qalad xun uu sameeyay.
Daqiiqadii 90aad waxaa Arsenal gool quusin ah u soo celiyay weeraryahan Olivier Giroud oo ciyaarta bedel ku soo galay kaasoo madax ku dhaliyay kubad uu soo qaaday Monreal, waxaana goolkaas ay ciyaarta ka dhigtay 3-1.
Waxa ay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Chelsea kuwaasoo haatan fursad weyn u heysta hanashada horyaalka madaama ay 12 dhibcood oo nadiif ah ay ku qabteen hogaanka